किड्नीको उपचारका लागि गएकी दमौलीकी युवतीको काठमाडौंमा निधन – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun किड्नीको उपचारका लागि गएकी दमौलीकी युवतीको काठमाडौंमा निधन – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
१७ भाद्र २०७७, बुधबार ०२:५६
पहिले रिपोर्ट नेगेटिभ पछि पोजिटिभ
भदौ १७, दमौली
किड्नीको उपचारका लागि काठमाडौं गएकी व्यास २ की एक युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । शुरुमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखिए पनि पछि भने उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
पारिवारिक श्रोतका अनुसार व्यास २ कालिका मार्गकी युवती यस अघि बाथको औषधी सेवन गर्थिन् । पिताका अनुसार बिरामी परे पछि काठमाडौंको अल्का अस्पतालमा उपचाररत उनलाई भाद्र ४ गते अल्का अस्पताल लगिएको थियो । अल्काले किड्नी फेल भएको र अवस्था जटिल भएको भन्दै १६ गते विहान त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरेको थियो । त्यहीं उपचारका क्रममा मंगलबार दिउँसो उनको मृत्यु भएको बताइएको छ ।
पिताका अनुसार अघिल्लो दिन लिइएको स्वाबको नतिजा विहान पोजिटिभ भनेर चिकित्सकले जानकारी दिएका थिए । उनको राजधानीमा सेनाले मंगलबारै अन्त्येष्टि गरेको बताइएको छ ।
आमाको नतिजा नेगेटिभ
व्यास २ का वडाध्यक्ष काशिराम श्रेष्ठले युवतीको निधनपछि परिवारका तीन सदस्य होम आइसोलेसनमा रहेको र अन्य सदस्य पहिल्यै घरबाहिर रहेको जानकारी दिए । ‘उहाँहरु अरुबाट बेग्लै हुनुहुन्छ,’ उनले भने,‘अब केही दिनपछि पीसीआर संकलन गछौं ।’ घरमा पसल गर्नेलाई पनि बेग्लै रहन भनिएको उनले बताए ।
युवतीका पिताको परीक्षण नभए बपनि आमाको भने यस अघि नै नतिजा नेगेटिभ आएको थियो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १७ भाद्र २०७७, बुधबार ०२:५६ 10002 Viewed